कुन समुदायबाट कति जना आउँछन् कांग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधि ? – Karnalitimes
कुन समुदायबाट कति जना आउँछन् कांग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधि ?
कर्णाली टाइम्स आइतवार, भदौ २७, २०७८
सुर्खेत। नेपाली कांग्रेसले भदौ १८ गतेदेखि वडा अधिवेशन गरिरहेको छ। ५६ जिल्लाका विभिन्न वडाहरूमा अधिवेशन भए पनि २१ जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन। सुरूमा भदौ १८ मै देशभरका ६ हजार सात सय ४३ वडामा एकैदिन वडा अधिवेशन गर्ने तयारी थियो।
पहिलो चरणमा क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गरिएको ५६ जिल्ला भित्रका वडाहरूमा मात्रै अधिवेशन भयो। बाँकी २१ जिल्लाका वडा अधिवेशन गर्न कांग्रेसले असोज ५ गतेसम्म समय दिएको छ। विवादित क्षेत्रमा वडा अधिवेशन अनिश्चित बनेपछि कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर ९ देखि १३ सम्म नै गर्ने गरी तल्लो तहको अधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गरिसकेको छ।
टोलदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म कांग्रेसले आठ तहमा अधिवेशन गर्छ। वडा अधिवेशनबाट आएका क्षेत्रीय प्रतिनिधि मध्येबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन हुन्छन्। केन्द्रीय सभापति, कार्यसमिति र सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट हुने हो भने महाधिवेशनका लागि पनि मतदाता महाधिवेशन प्रतिनिधि नै हुन्।
कांग्रेस विधानअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ जनाका दरले कूल चार हजार एक सय २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन्।
केन्द्रीय सभापति, पदाधिकारी र सदस्यहरू स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्, उनीहरू भने वडाबाट चुनिएर आउनु पर्दैन। आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य भने क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएर आउनुपर्छ।
महाधिवेशनमा महिला प्रतिनिधि एक हजार ३०४ जना आउँछन्, जुन ३१.६ प्रतिशत हो। प्रत्यक्षतर्फ ६ सय ६० जना र समानुपातिक ६ सय ४४ जना गरी महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउनेछन्।
अहिले फेरि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हुने प्रतिनिधित्वबारे बहस उठेको छ। हरेक क्षेत्रबाट आउने २५ जना सदस्यहरू समावेशी नै हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। जनसंख्याको बनोटअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने भएकोले कम जनसंख्या भएको समुदायबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि नै नआउने सम्भावना देखिएका छन्।
‘अघिल्लो महाधिवेशनमा मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्तिबाट प्रतिनिधित्व भन्ने थियो। समानुपातिकतर्फ ११ जनामा दुई जना महिलासहित भनेर एक आदिवासी जनजाति, एक दलित, एक मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति भन्ने थियो,’ ती नेता भन्छन्। सेतोपाटी
Prevलाइसेन्सको आवेदन अनिश्चितकाल बन्द, ३ लाखले परीक्षा र ६ लाखले कार्ड कुर्दै
Nextकर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई बुझायो वार्षिक प्रतिवेदन